အငယ်ဆုံးပီသစွာ Kyungsoo hyung ဆီက ပစ္စည်းတွေစိတ်တိုင်းကျယူသုံးတဲ့ ဂျစ်တူးလေး Sehun
EXO အဖွဲ့ဝင် sehun လေးဟာ ဒီနေ့မှာဘဲ SM Super Idol League အစီအစဉ်မှာ LOL Game ကို ပရိသတ်တွေနဲ့ အတူကစားခဲ့ပါတယ်။ Game လည်းကစားရင်း ထုံးစံအတိုင်း ပရိတ်သတ်တွေသိချင်တာ ပြန်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့အစီအစဉ်ကို Sehun ဟာ အစိမ်းနုရောင် Shirt အကွက်လက်ရှည်လေး ဝတ်လာခဲ့တာပါ။ ထို င်္အကျီမှာ ဝက်ဝံရုပ်လေးလည်း ပါ ပါသေးတယ်။
Fan တစ်ယောက်က “ဝက်ဝံလေးက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာဘဲ” လို့ ဝင်မန့်တော့ Sehun က “ဒါက ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်မလား…ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်က ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံစံပေါက်အောင် ဝတ်လာခဲ့တာ… ကျွန်တော် ဒီနေ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါ” လို့ ပြန်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။
Sehun ရဲ့ စကားတွေကို ဘာသာပြန်ပေးနေတဲ့ Translator အမကိုလည်း “ကျွန်တော် Chinese စကားပြောတတ်နေပြီ။ အမပြန်ချင်ပြန်လို့ရပြီ”လို့ လှမ်းဂျစ်လိုက်ပါသေးတယ်။ Sehun လေးရဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းပုံက ဒီမှာတင်မပြီးသေးပါဖူး။ သူ့အကို D.O. Hyung နဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့လည်း ခုလို ချစ်စဖွယ်ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
“hand-cream က အရမ်းစေးလို့ ကျွန်တော် တကယ်မသုံးတတ်ဖူး။ Kyungsoo Hyung က တော့ vaseline ကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ ဘယ်လောက်တောင်ကြိုက်လည်းဆို အိပ်ရာနား ထားအိပ်တယ်။ မအိပ်ခင် နှုတ်ခမ်းပေါ်လည်း လိမ်းအိပ်သေးတယ်။ အရင်တုန်းကဆို သူ့ဆီက ကျွန်တော်ခိုးသုံးနေကြ hee..hee”
Sehun ခုလို ယူသုံးဖူးတာ စည်းကမ်းကြီးပြီး မျက်နှာတည်တဲ့D.O. သာ သိသွားရင် ဘယ်လိုနေမလည်း မသိဖူးနော် ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရေ။ ကျန်တဲ့လူဆို D.O. နဲ့ ရန်ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်လောက်ပေမဲ့ အငယ်ဆုံးလေးကိုတော့ အလိုလိုက်ခွင့်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုတာ မြင်ယောင်နေပါပြီ။
Next အပြင်မှာမြင်ဖူးသူတွေရဲ့ ပြောဆိုချက်အရ ပေါက်စီမြေရဲ့ အချောဆုံး၊ အဟော့ဆုံး အလှပဂေး (၁၅) ဦး »
Previous « ၂၉ နှစ်အရွယ် အလှကို ‌‌ထုတ်ဖော်ပြသသွားတဲ့ ထိပ်တန်းမိန်းမချောစာရင်းဝင် Baifern Pimchanok
BLACKPINK member အကုန်လုံး ပွဲတက်မဲ့ 2021 ခုနှစ်ရဲ့ ‘Paris Fashion Week’